यी ५ नायिका, जसले कोरोना कहरमा गर्भधारण गरे – Khabaarpati
October 25, 2020 goodmamLeaveaComment on यी ५ नायिका, जसले कोरोना कहरमा गर्भधारण गरे
काठमाडौँ। सन् २०२० ले जहाँ विश्वका अधिकांस मानिसहरुमा lकोरोना भाइरसका कारण नैराश्यता ल्याएको छ । त्यसै समय कसैको जीवनमा भने खुसियाली पनि ल्याएको छ। हो, बुवा आमा बन्ने खुसियालीले बलिउडका थुप्रै कलाकारहरु हर्षित छन्। यस वर्ष बलिउडका थुप्रै कलाकारहरुले आफु बुवा आमा भन्न लागेको खबर आफ्ना दर्शक र प्रशंसकका माझ खुसीसाथ सार्वजनिक गरेका छन्।
बलिउडका ५ अभिनेत्री जसले यसवर्ष गर्भधारण गरे
१. अनुष्का शर्मा र विराट कोहली : चर्चित अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र भारतका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहोली यस वर्षको अगष्ट महिमा आफूहरु आमा बुवा बन्न लागेको खबर दिएका थिए। अगष्ट २७ अनुस्काले विराटसँगको एक तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आफ्ना प्रशंसकहरु माझ शुभ समाचार शेयर गरेका थिए।** ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ** **
२. करिना कपुर र सैफ अली खान : दोश्रोपटक सन्तानको सुख्खा पाउन लागेका जोडी हुन्, सैफ र करिना । यी दुई जोडीबाट पहिलो छोरा सन् २०१६ मा भएको थियो। आफु दोश्रोपटक आमा बुवा बन्न लागेको खबर आधिकारिकरुपमा करिनाले आफैँ दिएकी थिइन्। अहिले त करिना आफ्नो बेबी बम्पका साथ फोटो पनि खिचाउने गरेकी छिन्।
३. अमृता राओ र आरजे अनमोल : अमृता राव र आरजे अनमोलले आफ्नो पहिलो सन्तानको अपेक्षा गरिरहेको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन्। दुवैले सन् २०१६ मा विवाह गरेका थिए। विवाह गरेको चार वर्षपछि उनीहरु आमा बुवा बन्न लागेका हुन्। यद्यपि, दुवैले सामाजिक संजालमा यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर, मुम्बई मिररका अनुसार अनुसार दुवैलाई खारमा एक चिकित्सकको क्लिनिक बाहिर देखिएका थिए।
४. अनिता हसनन्दानी र रोहित रेड्डी : चर्चित टेलिभिजन सिरियल नागिनबाट लोकप्रियता कमाएकी अभिनेत्री हुन्, अनिता हसनन्दानी। उनले हिन्दी, तेलगु गरेर दर्जनौं चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन्। अनिताले हालै इन्स्टाग्राममा भिडिओ सार्वजनिक गर्दै आफु आमा बन्न लागेको खबर आफ्ना प्रशंसकहरूसँग शेयर गरेकी हुन्।
५. पूजा बेनर्जी र सन्दिप सेजवाल : पूजा बेनर्जी एक भारतीय अभिनेत्री हुन्। उनले स्टार प्लसबाट प्रसारित हुने लोकप्रिय कार्यक्रम ’तुजसंग प्रित लगाई सजनामा’ वृन्दाको भूमिका निर्भाह गरेकी थिइन्। त्यसैगरी, सन् २०१४ को ’झलक दिखला जा’ मा प्रतिस्पर्धी थिइन् । यसैगरी उनका पति सन्दिप सेजवाल भारतको राष्ट्रिय पौडीवाज हुन्। यी दुई जोडीले पनि आफु बुवा आमा हुन लागेको समाचार सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राम मार्फत दिएका थिए।